Shaqo ka fariisiga dhakhaatiirka Tansaaniya wuxuu saamayn badan ku yeeshay kumanaan dadka bukaanka ah
Waxaa qoray Deodatus Balile oo Daaru Salaam jooga Maarso 15, 2012
Kumanaan dadka bukaanka ah ayay saamaysay shaqo ka fariisiga ay dhakhaatiirta dalka Tansaaniya ka sameeyeen, kaasi oo la joojiyay toddobaadkii hore ka dib afar maalmood oo dawladda la is mari la’aa, sida ay sheegeen masuuliyiin ka tirsan isbitaalku.
Hooyo da’yar oo daryeel caafimaad ku sugaysay Isbitaalka Temeke uu ku yaala Daaru Salaam sanadkii 2007-dii. Wakhtigan xaadirka ah Isbitaalka Temeke waxaa yimaada 2,000 oo bukaan maalintii. [Roberto Schmidt/AFP]
Maamullada gobollada Kenya iyo dhakhaatiirta oo isu haya adeegyada caafimaadka la baahiyay
Wadanka Kenya, Dawo cusub oo lagu daweeyo kansarka dhuunta ilmo-galeenka dumarka oo rajo galiyay kumanaan bukaan ah
Shaqo ka firiisiga ay sameeyeen dakhaatiirka bulshada u addeegta ayaa horseeday in tiro tii caadiga ahayd ka badan oo dadka bukaanka ahi ay u soo leexdaan isbitaallada dadwaynaha u furan si loo daaweeyo. Aminiel Aligaesha oo ah masuul xiriirka dadwaynaha u qaabilsan Istitaalka Qaranka Muhimbili (MNH) ayaa Sabahi u sheegay in 2,700 oo dadka bukaanka ah wax loogu qabtay isbitaalka. Muhimbili waa xarunta caafimaadka ee ugu wayn Tansaaniya waana xarunta caafimaadka dadwaynaha ee ugu muhiimsan ee dadka bukaanka ah ee ka kala yimaada guud ahaan dalka kuwaasi oo helaaya daryeel gaar ah, ayuu yiri Aligaesha.
Isbitaalka waxaa ka shaqeeya 259 dhakhtar kuwaasi oo dhammaantood ka qayb-qaatay shaqo ka fariisiga sidoo kalena waxaa iyaguna qaybka ahaa 1,010 kalkaaliso oo sheegay inaanay dhakhtar la’aan shaqayn karin.
Qorshe si gaara loo soo abaabulay ayaa waxaa isbitaallada magaalada lagu geeyay 67 ka mid ahayd dhakhaatiirta rug caddaaga ah ee ka shaqaynayay xarumaha looga taliyo Wasaaradda Caafimaadka, iyadoo la sameeyay qorshayaal dadka bukaanka ah ee ku soo burqaday isbitaallada dadwaynaha loogu wareejinayo xarumaha caafimaad ee gaarka ah, sida uu sheegay Dr. Donnan Mmbanada oo ah ku-simaha maamulaha caafimaadka ee MNH.
Maamulaha hawlaha caafimaadka ee Isbitaalka Temeke Dr. Amani Malima ayaa sheegay in shaqo ka fariisigu uu saameeyay 10, 000 oo ah dadka bukaanka ah guud ahaan dalka. ”Bal eeg isbitaalkan Temeke tirada bukaan socotada oo ku dhawayd 1,500 ayaa gaartay in ka baddan 2,000 maalintii. Waan kala maarayn kari waynay tiradaasi, xaaladu isku mid ayay ahayd inta baddan isbitaalada dalka,” Malima ayaa Talaadadii (March 13-keedii) sidaasi u sheegay wargayska ay dawladdu leedahay ee Habari Leo.
“Xaaladu aad bay u xumayd,” ayuu yiri Aligaesha. “Waxaan u mahad-celinaynaa madaxweynaha siddii uu arrinta u soo faraggeliyey iyadoo ay xaaladu faraha ka sii baxaysay.”
Dadka bukaanka ah oo lagaga tagay xaalad qalafsan Adelina Porokwa oo jirta 46 sano macallimadna ka ah caasimadda Daaru Salaam ayaa sheegtay inay shan maalmood sugaysay si ay dhakhaatiirtu u soo laabtaan si ay u sameeyaan balan hore oo qalitaan oo lagu samayn lahaa inanteeda 11 jirka ah ee Annet. Wax kasta waa loo diyaariyay. Xataa waxaan saxiixnay in qalitaankeeda la sameeyo, laakiin si kadiso ah waxaa naloo sheegay in aanay goobta joogin dhakhaatiirka hawsha fulin lahayd,” ayay tiri Porokwa. “Ugu dambayn waxay si guul ku dhammaatay u qaleen maanta,” ayay Porokwa Talaadadii u sheegtay Sabahi. “ Eebbe ayaan ugu mahadcelinayaa, laakiin ma rabo inaan ka fikiro dhibkii ay soo martay.” Porokwa waxay sheegtay in qoyskeedu aanu awoodayn inay inanteeda dalka dibaddiisa u qaataan si ay u hesho daryeel caafimaad sidoo kalena ka walwalaysay inay suurto gal ahayd inay nafteeda waydo haddii ayan dhakhaatiirku soo laaban lahayn si ay qalitaanku ugu sameeyaan inanteeda. “ rajadii ugu dambaysay ayaan qabay, laakiin hadda waxaan dareemayaa nafis, Ilaahay ayaa ila jira,” ayay tiri Porokwa.
Salum Haji oo ahaa qof bukaan ah oo dhabarka laga hayay ayaa Sabtidii Sabahi u sheegay inuu arkay shan qof oo ka mid ahaa dadkii bukaanka ahaa oo dhimanaaya iyadoo aan cidina la joogin, maydkoodiina uu iska sii yaalay qolka dadka bukaanka loogu talo galay muddo ka badan intii caadiga ahayd.
“Tani waa arrin cabsi leh oo laga yaq-yaqsoodo… si kasta oo loo eego waa wax bani’aadminimada ka baxsan,” ayuu Haji u sheegay Sabahi. Wuxuu yiri waa in dawladdu ay hal mar arinka xalisaa.
Waxyaallaha ay dhakhaatiirtu dalbanayaan
Dhakhaatiirka bulshada u adeegta dalabyadooda ugu wayn waxaa ka mid ah in loo kordhiyo mushaharka, wanaajinta xaaladahooda shaqo iyo helitaanka qalab tayo leh si ay ugu addeegaan dadka bukaanka ah. Waxay dalbadeen in mushaharka caadiga ee dhakhaatiirka cusub oo ahaa 950,000 oo shilling laga gaarsiiyo 3.5 malyuun oo shilling, iyo inay helaan dhaqaale dheeraad ah oo loogu tala galay xaaladaha halista ahi markay jiraan, iyadoo sidoo kalena dalbaday dhaqaale daboola baahidooda gaarka ah iyo gaadiidka. Dhakhaatiirku waxau sidoo kale codsadeen in dhammaan dadka shaqaalaha ah la siiyo caymis daboolis caafimaad oo aan loo cayimin iyadoo la addeegsanayo Sanduuqa Caymiska Caafimaadka Qaranka.
“Haddii aan isku darno dhamaan dalabyadani, dhakhtarka cusubi wuxuu bishii heli doonaa 7.7 malyuun oo shilinka Tansaaniya ah. Go’aankaasi awgeed dhakhaatiirka takhasuska leh waxay heli doonaan 17 malyuun oo shilinka Taansaaniya ah,” ayuu Isniintii sheegay madaxweyne Jakaya Kikwete isagoo muujiyay walaaca uu ka qabo in mushaharka ay dhakhaatiirtu dalbadeen uu aad ugu badan yahay inay dawladdu awoodo. Iyadoo xaalku sidaasi yahay, ayay haddana Isniintii dhakhaatiirtu hakiyeen shaqo ka fariisigoodii ka dib markii wadahadal xoogan ay dawladda la galeen mudadii afartii maalmood ahayd ee la is mari la’aa. “Waxaan wadahadallo xasaasi ah oo socday sagaal saacadood oo xiriir ah la yeelanay madaxweynaha sharafta leh ee Kikweta,” Maamulaha Ururka Caafimaadka ee Taansaaniya Dr. Namala Mkopi ayaa warbixin ku sheegay sidaasi. “Wadahadalladu waxay ahaayeen kuwo miro dhal ah waxaanan aaminsanahay sidoo kalena rumaysanahay wuxuu madaxweynuhu noogu balan qaaday… sidaa darteed, anigoo sidaa iri, ayaa waxaan dhammaan dhakhaatiirka si toos ah u waydiisanaynaa in ay shaqooyinkoodii dib u bilaabaan iyadoo laga bilaabayo haddadan la joogo."
Mkopi wuxuu muujiyay rajada uu ka qabo in madaxweynuhu wax ka qaban doono arrimahan aan wali la xallinin. “Waa madaxweynaha dalkan waxaanan rumaysanahay inuu balan ku qaaday inuu fuliyo wixii lagu heshiiyay,” sidaasi ayuu Mkopi maalintii Axaddii u sheegay koox suxufiyiin ah ka dib markii uu dhakhaatiirta ka dalbaday in ay shaqooyinkoodii dib u bilaabaan.
Kikweta ayaa u kala dab-qaaday dhinacyadii ku wadahadlayey heshiiskaasi oo -waa heshiiskee- dhakhaatiirka dib ugu soo celiyay Isbitaalada. Wuxuu sheegay in wadahadal toos ahi uu bilaabi doono guddi uu hoggaaminayo Ra’iisal Wasaaraha Mizengo Pinda, laakiin wali lama cayimin wakhtiga la qaban doono kulankaasi. Tani waxay ahayd shaqo ka fariisigii labbaad ee ay sanadkan sameeyaan dhakhaatiirtu – shaqo ka fariisigii koowaad wuxuu socday muddo ilaa 17 maalmood ah oo ahaa bilihii January iyo February. Ma jeclaysatay maqaalkan?
Dadkan wax ma ka baran karaan waxa hadda Kenya ka socda.
Takhaatiirta waa in ay u tagaan bukaanada dhimanaya inta cabashadooda laga eegayo
Xukuumadda waxaa laga yaabaa in ay sawiratay guusha loolanka ay kula jirtay takhaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha, balse waxaan ka baqayaa in aan waxba laga qabanin xallinta dhibaatadan, sida looga tagay dhibaatooyin badan oo aan la xalinin. Inta aan ka warqabo sida dadka tansaaniyanka ah ay ula dhaqmeen hoggaamiyeyaashooda awoodda iyo kibirka badan, wax guddi ah ee la sameynayo ma jiraan. Waa isla, Raysul Wasaare Mizengo Pinda, oo talaabadiisa ugu horreysay xalinta dhibaatadan marka uu mudaaharaadka dhacay yiri "ha mudaaharaadan, waxaan isticmaalaynaa takhaatiirta milatariga, intii aan la fidhiisan lahayn oo aan la hadli lahayn". Balse tani qofna kama yaabinin sababtoo ah dadka tansaaniya waxay mar horeba la qabsadeen balan-qaadyo been ah. Meeqa jeer ayuu Madaxweynaha iyo kooxdiisa ay ballan-qaadeen xallinta arrimo badan oo xasaasi ah? Balan-qaadkiisa ugu horreeya ee uusan fulinin wuxuu ahaa "Nolal wanaagsan oo uu u ballan-qaadday qofka kasta oo tansaaniya u dhashay", waa balan qaan aan waligiisa la fulinin. Waxaa sidoo kale mar badan loo ballan-qaaday koronto, oo ilaa heer ay ka noqotay xalaqad xiran oo iskadba-wareeg ah - marka ay jirto abaar, koronto ma jirto sababtoo ah biyo ma jiraan; marka aysan jirin biyo badan oo laga dhaliyo korontada, makiinadaha ma shaqeeyaan. waxa kaliya ee xaqiiqdii batay waa musuq maasuqa. Tansaaniya Maskiin! Masaakiinta dadka reer Tansaaniya!.